“Anigu Waxaan Sheegay Waxa Jira, Isaguna Tiro Ayuu Sheegay Laakiin Tiradaasi Sax Maaha, Laakiin…”-Wasiirka Maaliyadda | Himilo Media Group
“Anigu Waxaan Sheegay Waxa Jira, Isaguna Tiro Ayuu Sheegay Laakiin Tiradaasi Sax Maaha, Laakiin…”-Wasiirka Maaliyadda
Hargeysa, 07 Feb, 2019 (Himilo)- Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somaliland Dr Sacad Cali Shire, ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin deyn $80 Milyan oo xukuumaddii hore ka tegtay, waxaanu arrin la marin-habaabiyey oo qaab siyaasadeed looga faa’idaystay ku tilmaamay kulan dhex maray isaga iyo guddiga Dabagalka hantida ee Golaha Wakiillada.
Arrinka ku saabsan Deynta $80 Milyan ayaa soo baxday kaddib markii toddobaadkan kulan xog-wareysi ahi dhex maray Wasiir Sacad Cali Shire iyo Guddiga Daba-galka Musuqa iyo Ilaalinta Hantida Qaranka ee Golaha Wakiillada, waxaana markii kulankaasi dhammaaday saxaafadda la hadlay Guddoomiyaha Guddigaas Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo sheegay in xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi la ciir-ciirayso Deyn lacagteed oo dhan $80 Milyan oo ay kaga tagtay Xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo. Wasiir Sacad oo halkaas ka hadlayna, sooma hadal qaadin mana beenin hadalka xildhibaanka.
Haseyeeshee, Wasiir Sacad Cali Shire oo shalay ka hadlay arrintan, waxa uu sheegay in Lacagta Deynta ah ee xildhibaanku kaga dhawaajiyey aan haba-yaraatee lagu soo Hadal-qaadin kulanka, isla markaana aanay ku jirin qodobbadii laga wada-hadlay ee ay isla garteen guddiga.
“Lacagtaasi ma jirto umana qiran. Laakiin haddaan faahfaahin ka bixiyo, waxa wasaarad ahaan nagu marti-qaaday Guddiga Dabagalka Hantida Qaranka si aanu uga wada-hadalno warbixintii hanti-dhowrka Qaranku ka soo bixiyey miissaaniyaddii 2017-kii iyo talooyinkii guddiga. Waxaanu ka wada-hadlnay maareynta Deynta, diiwaangelinta hantida, maareynta miisaaniyadda madaxyadeeda. Waxaanu isla garannay in arrin walba sida sharcigu odhanayo loo maro,” sidaas ayuu yidhi Wasiir Sacad Cali Shire.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay, waxa uu intaas raaciyey, “Markii aanu soo baxnay ee aanu hor nimid saxaafadda oo ahayd inaanu intaas u sheegno, ayuu xildhibaanku ku daray waxyaabo aanaan ka wada-hadal oo aan jirin. Waxyaabaha aan jirin waxa ka mid ah arrinkaas Siddeetanka Milyan ee lagu leeyahay dowladda.
Wasiir Maaliyaddu oo ka hadlayey sababta aanu arrintan uga jawaabin xilligii munaasibka ku ahaa ee isaga iyo xildhibaanka kale la hadleen saxaafadda, waxa uu ku dooday, “Innaga cid wax innagu lihi ma jirto hadday tahay baanka adduunka, bangiyo kale ama dad ajaanib ah. Runtii waa laga qurux badan yahay oo maaha inaynu ku yooyootanno meel fagaare ah,” ayuu yidhi Dr Sacad Cali Shire.
Haseyeeshee, Wasiir Sacad Cali Shire waxa uu xildhibaanka ku eedeeyey inuu sifo siyaasadeed uga faa’iidaystay hadalka warbaahinta uu ka sheegay oo uu ku tilmaamay mid aan ku jirin Qodobadii guddiga ka wada-hadleen.
“Anigu waxaan sheegay waxa jira, isaguna tiro ayuu sheegay laakiin tiradaasi sax maaha. Isaga (Xildhibaanka) waxa laga yaabaa siyaasaddaa jiidatay, laakiin wax aanu ka soo wada-hadalnay may ahayn,” sidaas ayuu yidhi Wasiirka Maaliyadda Somaliland.
Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa ayaa ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI isagoo dhowrkii sanno ee u dambeeyey soo hayay xilka Afhayeenka Xisbiga, haseyee maalin kaddib kulankii dhex maray wasiirka iyo guddiga, waxa xisbiga Waddani ka soo baxay War-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay Guddoomiye Cirro, kaas oo afhayeenka Xisbiga loogu magacaabay Barkhad Jaamac Batuun, iyadoo dhinaca kale aan war-saxaafadeedka lagu sheegin in xilka laga qaaday afhayeenkii hore.